Meydka Sala oo ugu dambeyn la helay…..(Kubbada Cagta adduunka oo ka wada Tacsiyeesay) – Gool FM
Horudhaca kulanka galabta kooxaha Southampton vs Liverpool ee horyaalka Premier League
Meydka Sala oo ugu dambeyn la helay…..(Kubbada Cagta adduunka oo ka wada Tacsiyeesay)
Byare February 8, 2019
(Europe) 08 Feb 2019. Waxaa ugu dambeyn la xaqiijiyay inuu Geeriyooday Emiliano Sala kaddib markii la soo helay Meydkiisa.
Meydka ayaa Arbacadii laga dhex helay dayuuradii yareyd taa oo laga soo saaray biyaha hoose ee badda Woqooyinka Guernsey, kaddib labo usbuuc oo la waysanaa.
Yeelkeede, waxaa weli la la’yahay Duuliyihii Dayuurada David Ibbotson.
Dayuurada nuuceedu ahayd Piper Malibu N264DB ayaa la waayay 21-kii Janaayo mar ay ka soo socotay Nantes kuna soo jeeday Cardiff, si uu laacibka 15-milyan ugu soo biiro kooxdiisa Cusub ee Premier League.
Markii hore waa la iska joojiyay baaritaanada, balse ciyaartoy oo uu ka mid yahay Lionel Messi ayaa u istaagay oo iska soo ururiyay lacago ilaa 300,000 si baaritaano gaar ah loogu sameeyo taa oo ugu dambeyn lagu guuleystay in lagu soo helo Meydka xiddiga.
Adduunka Kubbada Cagta ayaa Tacsi ka wada diray arinkan dhaxdinta leh:
Isco oo ka baxay aamusnaanta, kadib markii uu si cad u weeraray tababare Solari
Hordhaca: Jeenyo Vs Muqdisho City